ए डिभिजन लिगको छैटौं चरण, ५ गोल, २ रातो कार्ड, मैदानमै एम्बुलेन्स! | | Neplays.com
ए डिभिजन लिगको छैटौं चरण, ५ गोल, २ रातो कार्ड, मैदानमै एम्बुलेन्स!
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत छैटौं चरणका खेलहरु सम्पन्न भएका छन् । दशरथ रंगशालामा त्रिभुवन अर्मी र संकटा क्लबबीचको अन्तिम प्रतिस्पर्धासँगै छैटौं चरणका खेलहरु पुरा भएका हुन् । छैटौं चरण सकिँदा मछिन्द्र क्लब १३ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ भने उसको जारी लिगमा अपराजित यात्रा कायमै छ । शीर्ष स्थानमा रहेको मछिन्द्र अपराजित रहे पनि ४ खेलमा जित र २ खेलमा बराबरी खेल्दै १३ अंक जोडेको छ । गत संस्करणको १ अंक उसको घटाइएको हो । आर्मी पाँचौं चरणको अन्तिममा शीर्ष स्थानमा उक्लिए पनि छैटौं चरणको अन्तिम खेलमा बराबरी खेलेपछि दोस्रो स्थानमा रहन पुग्यो ।
गत संस्करणको लिग च्याम्पियन मनाङ मस्र्याङ्दी अपराजित रहे पनि ३ खेलमा जीत र ३ खेलमा बराबरी गर्दै १२ अंकका साथ तेस्रो स्थानमा रहेको छ । चौथो स्थानमा ललितपुरे क्लब थ्रीस्टारले १० अंक जोडेको छ भने पाँचौं स्थानमा रहेको जावलाखेल युथ क्लबको ९ अंक छ । एनआरटी र नेपाल पुलिसले ८–८ अंक बनाउँदै छैटौं र सातौं स्थानमा रहँदा गत संस्करण दोस्रो भएको संकटा ७ अंकसहित आठौं स्थानमा छ । यसैगरी ७ अंक नै भएको ब्रिगेड ब्वाईज नवौं स्थानमा छ भने ६ अंकसहित च्यासल दशौं स्थानमा रहेको छ । ५–५ अंक जोडेको फ्रेण्ड्स एपीएफ ११ औं र १२ औं स्थानमा रहँदा ४ अंक जोडेको हिमालयन शेर्पा १३ औं र १ अंक जोडेको सरस्वती १४ औं स्थानमा छ ।
छैटौं चरणको खेलमा ललितपुरे डर्वीमा थ्रीस्टार तालिकाको १२ औं स्थानमा रहेको फ्रेण्ड्ससँग पराजित भयो । फ्रेण्ड्सले जीतसहित स्पष्ट तीन अंक जोड्दा थ्रीस्टारलाई पराजयले तालिकामा ठूलो धक्का लाग्यो । यो चरणमा जावलाखेलको अपराजित यात्रामा पनि पूर्ण विराम लाग्न पुग्यो । यसैगरी छैटौं चरण सकिदासम्म हिमालयन शेर्पा र सरस्वती क्ल्ब जितविहीन छन् भने च्यासल एपीएफ र फ्रेण्ड्सले एक एक खेलमा जित हात पारेका छन् ।
छैटौं चरणको पहिलो खेलमा जावलाखेल र मछिन्द्र क्लबले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । जसमा मछिन्द्र १–० गोल अन्तरले विजयी हुँदै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको थियो । मछिन्द्रलाई जिताउनका लागि विशाल राईले गरेको एक मात्र गोल नै निर्णायक बन्यो । यस खेलमा मछिन्द्रका योगेश गुरुङ, सुजल श्रेष्ठ र आन्द्रेस ठोचुन्केले पहँलो कार्डको दर्शन गरे ।
दोस्रो खेलमा मनाङ मस्र्याङ्दी र हिमालयन शेर्पा भिडेका थिए । यो खेल बराबरी भयो । पाँचौं चरणको खेलमा मछिन्द्रसँगको खेलपछि खेलाडीहरुकाबीचमा झडपहुँदा मनाङका तीन जना खेलाडीलाई गरिएको कारबाही यो खेलमा देखियो । जसले गर्दा शेर्पामाथि मनाङले प्रभाव जमाउन सकेन र गोलरहित बराबरी गर्दै एक अंमा चित्त बुझायो । जसले गर्दा लिग मनाङ शीर्ष स्थानमा उक्लन सकेन ।
मनाङ र शेर्पाबीचका खेलमा चार वटा पहँेलो कार्ड र एउटा रातो कार्ड देखाए । रातो कार्ड मनाङका सुरज विकले पाए भने अन्जन विष्ट, जीवन गुरुङ र कमल श्रेष्ठले पहेँलो कार्डको दर्शन गर्दा अर्को एउटा पहँलो कार्ड संकटाका स्टेफन सामिर डुवेनले देखेको थिए ।
छैटौं चरणको तेस्रो खेलमा ललितपुर डर्बीका क्लब भिडेका थिए । थ्रीस्टार र फ्रेण्ड्सबीचको प्रतिस्पर्धामा फ्रेण्ड्सले बाजी मारेको थियो । फ्रेण्ड्सले थ्रीस्टारलाई १–० ले पराजित गर्दै जारी लिगमा पहिलो जितको स्वाद चाख्यो । फ्रेण्ड्सलाई जिताउनका लागि वाग्नर डी क्यामरोले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो ।
यो खेलमा फ्रेण्ड्स र थ्रीस्टार दुवै टिमका एक ए खेलाडीले पहेँलो कार्ड दर्शन गरे । फ्रेण्ड्सका सुरज गुरुङ र थ्रीस्टारका प्रविण कुमार सैजुले पाएका हुन् ।
चौथो खेलमा ब्रिगेड ब्वाईज र सरस्वती युथ क्लब आमने सामने भएका थिए । यो खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो । यसमा सरस्वतीका सुसन लामाले मात्र पहेँलो कार्डको दर्शन गरे ।
पाँचौं खेलमा न्यूरोड टिम एनआरटी र नेपाल पुलिस क्लब आमने सामने भएका थिए । एनआरटीले पुलिसमाथि १–० को जीत निकाल्न सफल भयो । एनआरटीका जितमा ७६ औं मिनेटमा दर्शन गुरुङले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो । यो खेलमा पुलिसका २ र एनआरटीका १ जना खेलाडीले पहेँलो कार्ड पाए । पुलिसका निरकुमार राई र मनबहादुर परियार तथा एनआरटीका जुनियर निकंगेले पहेँलो कार्ड पाएका हुन् ।
छैटौं खेलमा च्यासल र एपीएफ आमने सामने भए । यो खेल गोलरहित बराबरीमा सकियो भने यसमा कुनै पनि टिमका खेलाडीले कार्ड पाएनन् ।
सातौं तथा छैटौं चरणको अन्तिम खेलमा संकटा र त्रिभुवन आर्मी भिडेका थिए । दुवै टिमले एक एक गोलको बराबरी खेले । पहिलो हाफमा विभागीय क्लब आर्मीले अग्रता लिएको थियो ।
आर्मीले नवयुग श्रेष्ठको गोलको मद्दतले अग्रता लिएको थियो । नवयुगले २९ औं मिनेटमा फ्रिकीक मार्फत आएको बेललाई हेड गर्दै गोल गरेका थिए ।
तर दोस्रो हाफको शुरुमै आर्मीलाई धक्का लाग्यो । आर्मीका युद्ध शाही रातो कार्ड पाउँदै मैदान बाहिरिए पछि १० खेलाडीमा सिमित भएको थियो । पहिलो हाफको १० औं मिनेटमा पहिलो पहेँलो कार्ड पाएका युद्धले ५१ औं मिनेटमा दोस्रो पहेँलो कार्डको दर्शन गर्दै मैदान छाडेका थिए । त्यसपछि दबाबमा आएका आर्मीलाई संकटाले गोल फर्र्र्र्काको थियो । संकटाका अमित तामाङले पेनाल्टीमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए ।
आर्मीका सुमन अर्यालले फल गरेपछि संकटाले पेनाल्टी पाएको थियो । उक्त पेनाल्टीलाई अमितले मिस गरेनन् । ८० औं मिनेटमा आर्मीका कप्तान भरत खवास नवयुग श्रेष्ठलाई रिप्लेस गर्दै मैदान प्रवेश गरेका थिए । तर उनी १ मिनेटमै घाइते हुन पुगे । संकटाका लक्ष्मण रुचालले प्रहार गरेको फ्रि कीक उनको टाउँकोमा लाग्दै लडेका थिए ।
असहज महशुस गरेपछि खेलाडी र रेफ्री दौडिएर भरतको स्थानमा पुगेका थिए भने तत्कालै मेडिकल टिम र एमबुलेन्सनै मैदान प्रवेश गराइएको थियो । तर भरत एम्बुलेन्समा भने चढेनन् । उनी हिडेर मैदान बाहिर गएका थिए । त्यसपछि शुरु भएको खेलमा दुवै तर्फबाट कुनै पनि गोल नभएपछि संकटा र आर्मीले एक एक अंक लिए ।
आर्मी र संकटाबीचका खेलमा एक रातो कार्ड र २ वटा पहेँलो कार्ड देखाइए । आर्मीका युद्ध शाहीले २ वटा पहेँलो कार्ड पाएपछि रातो कार्ड पाउँदै मैदान बाहिरिएका थिए । यसैगरी सन्तोष तामाङले पनि पहेँलो कार्ड पाएका थिए भने संकटाका विष्णु सुनारले पहेँलो कार्ड पाए । यस खेलमा नवयुग श्रेष्ठ र अमित तामाङले एक एक गोल गरे ।
समग्रमा सातौं चरणमा सवै टिमबाट गरि ५ गोल भए भने २ वटा रातो कार्ड देखाइएका छन् । अब सातौं चरणका खेलहरु ३ गतेदेखि शुरुहुने छन् । सातौं र आठौं चरणका खेलहरु दशरथ रंगशालामा हुने जनाइएको छ । ३ गते एउटा मात्रै खेल हुने छ भने अरु दिन २–२ वटा खेल हुने छन् । पहिलो दिन मछिन्द्र र हिमालयन शेर्पा आमने सामने हुने छन् । ४ गते जावलाखेल र नेपाल पुलिस तथा मनाङ र थ्रीस्टारबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ ।
एन्फा गोरखाद्वारा विपन्नलाई खाद्यान्न सहयोग
विश्व फुटबलका ५ ‘फास्टेष्ट’ गाेल‍‍‍‍‍‍‍‍‍…
बार्सिलाेनाले ग्रिजमनलाई याे सिजन बिक्रि नगर्ने
म्यानचेस्टर युनाइटेडले ९०० स्टाफलाई नियमित काममा राख्ने
विलियनसँग २ बर्षकाे सम्झाैता गर्ने तयारीमा आर्सनल
खेलाडीकाे तलव ३० प्रतिशत काट्ने प्रस्तावमा शीतयुद्ध सुरु